Burcad-badeed badan ayaa la qabqabtay - BBC News Somali
Burcad-badeed badan ayaa la qabqabtay
6 Febraayo 2011
Image caption Ciidanka India oo qabtay burcad-badeed Soomaaliyeed
Wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka India waxay sheegtay in tiro ka badan 20 burcad-badeed ah ay qabteen, lagana soo badbaadiyay dad ay hore u afduubeen oo tiradoodu ka badan tahay 24 qof oo saarnaa markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka Thailand oo badweynta India laga qafaashay.
Waxaa kaloo jiray hawl gal ay qaadeen ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha oo ka dhacay xeebta koonfur galbeed ee waddanka India. Waa guushii 2aad ee noocaas ah ee ciidanka badda India ay gaaraan muddo toddobaad gudihiis ah.
Burcad-badeedda oo Soomaali u badan waxay si xoog leh uga hawl galaan gobolka badweynta India, waxayna qaadeen weerarro badan sannadihii ugu dambeeyay. Ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ee India waxay sheegeen in burcad-badeeddu is-dhiibeen kaddib markii rasaas la is-weydaarsaday, lana soo qabtay iyaga iyo shaqaalihii saarnaa markab laga leeyahay dalka Thailand oo lagu magacaabo Pantralay 11, oo ay u isticmaalayeen inay ka soo duulaan marka ay maraakiibta soo qabsanayaan.
Burcad-badeedda waxaa hadda loo sii wadaa xagga magaalada Mumbai halkaas oo lagu wareejin doono mas'uuliyiinta magaalada si tallaabo sharci ah looga qaado.